Iindlela ezi-7 zekhuphoni onokuzibandakanya kubhubhane ukuqhuba iinguqu ezininzi kwi-Intanethi | Martech Zone
Iingxaki zale mihla zifuna izisombululo zale mihla. Ngelixa oku kuvakala kuyinyani, ngamanye amaxesha, iindlela ezifanelekileyo zokuthengisa ezindala sesona sixhobo sisebenzayo nakweyiphi na iarhente yomthengisi wedijithali. Kwaye ngaba kukho nantoni na endala kunye nesidenge ngakumbi kunesaphulelo?
Urhwebo luye lwafumana ukothuka okwenziwe ngumhlaba obangelwe yi-COVID-19. Ngethuba lokuqala kwimbali, siqwalasele indlela iivenkile ezithengisa ngayo zijongana nemeko enzima yemarike. Ukutshixwa okuninzi kunyanzele abathengi ukuba bathenge kwi-Intanethi.
Inani levenkile ezintsha ezikwi-Intanethi kwihlabathi liphela kwiqonga lazo lenyuke nge-20% kwiiveki ezimbini zokugqibela zika-Matshi 2020.
Ngelixa zombini ukuthengwa kwemveli kunye nokuthengwa kwi-Intanethi kuye kwafika hit, ilizwe ledijithali likwazile ukubuyela kwiinyawo ngokukhawuleza. Ngoba? Unikelo olubanzi lwezaphulelo kunye neekhowudi zokunyusa ukuthengisa okuzinzileyo kumaqonga e-ecommerce. Iivenkile ezithengisayo zenze okuninzi ukuhlala zingagungqi ngokwandisa inani lezonyuselo kunye nezibonelelo ezinomtsalane, ezikhokelela kumdla okhulayo wokuthenga nge-Intanethi, isisombululo esikhuselekileyo ngexesha lobhubhane.
Yintoni eyenza amakhuphoni abe sisicwangciso esiliqili sokubuyisa i-COVID? Ngamafutshane, izaphulelo zivumela ii-brand ukuba zibonise ukuba ziyakhathala ngelixa zihlala zikufikelela kumaxabiso abathengi abanolwazi ngohlahlo-lwabiwo mali oluqhelekileyo.
Ngale posi, ndifuna ukukunika umbono weyona mikhankaso yekhuphoni isebenzayo ngexesha lokungaqiniseki kwemarike okubangelwa yi-COVID-19.
Nanga amaphulo am esigqebhezana esiphakamileyo sasemva kwendyikityha yokufa:
Iikhuphoni zabasebenzi ababalulekileyo
Thenga enye, ufumane enye simahla or ezimbini ngexabiso elinye (BOGO) unyuselo
Ukuthenga amatikiti amaza
Ukuhanjiswa simahla kwamakhuphoni
Inkuthazo ehambelana neselfowuni
Khuphela isiKhokelo sokuGqibela seZicwangciso zeNtengiso
Isicwangciso sekhuphoni 1: Unikelo lwaBasebenzi abaBalulekileyo
Phakathi kwentengiso yeklasikhi kunye nemicimbi ye-BOGO, i-COVID-19 ikwazisa ngokubanzi izibonelelo kunye neekhowudi zokunyusa i-CSR zabasebenzi besibhedlele nabaphenduli bokuqala (umzekelo, amapolisa, abacimi-mlilo, njl.
adidas uyenzile. lenovo uyenzile ngokunjalo. Ungayenza nawe. Ukunikezela ngezaphulelo ezikhethekileyo kunye namakhuphoni kubasebenzi ababalulekileyo ngexesha lobhubhane komeleza kakhulu ukuthembeka kwabathengi kuhlobo lwakho kwaye kwenza inkampani yakho ibe lukhetho olucacileyo xa uthenga. Ngaphandle kwezibonelelo ezithe ngqo ezinxulumene nokunyusa ukunyaniseka kwabathengi kunye ne-CSR, ukubonelela ngeentengiso kwabo balwa kumgca wobhubhane yinto elungileyo ukuyenza.
Xa ndithetha ngokunyaniseka kwebrendi, andikwazi ukutsiba inyani yokuba ubhubhane utshintshe indlela yokuziphatha kwabathengi iye kwixabiso elijolise ngakumbi. Oku kuthetha ukuba abathengi kunokwenzeka ngakumbi kunakuqala ukuba bakhethe isithembiso sokhuphiswano ukuba imveliso yakho ayifumaneki okanye kwicala lomxhasi. Oku kuyinyani kuzo zombini i-B2C kunye ne-B2B brand. Kungenxa yoko le nto unokufumana ukwehla okukhulu ekukhuthazeni abathengi kunye nabathengi abambalwa ababuya bezokuthenga kuwe. Ukunikezelwa kwekhuphoni kukubheja okukhuselekileyo kunemikhankaso yokunyaniseka ngamaxesha oxinzelelo anje ngezi.
Ukuza nenkuthazo kunye nekopi yabasebenzi abalulekileyo kuphela amatikiti alungile ngokuthe ngqo, kodwa ukuchongwa komsebenzisi kunokuba ngumceli mngeni omkhulu, kuxhomekeke kubutyebi bakho beetekhnoloji. Ngethamsanqa, zikhona izixhobo ezinje I-SheerID or ID.me enokukunceda kulo msebenzi. Unokusisekela isaphulelo kwidilesi ye-imeyile njenge Beryl, Inkampani yokwabelana ngokukhwela, bayenzele iphulo labo le-COVID-19.
Isicwangciso sekhuphoni 2: BOGO Campaign Campaign zokuLahla isitokhwe esidala
Ngexesha leengxaki ze-COVID-19, abathengisi abaninzi bazabalaza ukugcina iishelufu zabo zigcwele. Ukuthengwa ngexhala, ukulungiswa kweebhotile, kunye nokutshintsha kokuziphatha kwabathengi kuyenze mandundu ingxaki ngokulungiselela izinto. Ngethamsanqa, imikhankaso yekhuphoni inokuwunciphisa ngempumelelo umba wesitokhwe esidala sithatha indawo yokugcina. Imikhankaso ye-BOGO (Thenga-One-Get-One-Free) isesona sesona sikhuthazi sithandwayo ukuza kuthi ga ngoku.
Ukunyuswa kweBOGO yeyona ndlela ilungileyo yokunyusa ukuthengisa kunye nokuthengisa okukhuthazayo okanye ukuhambisa iimveliso ezingathengisi kakuhle zodwa. Ukuba ubhubhane ubangele ukuba indawo yokugcina izinto igcwalise ngeempahla zokudada okanye izixhobo zokukhempisha, unganikezela simahla kwezinye iiodolo. Imikhankaso ye-BOGO isebenza kakuhle ngexabiso elisezantsi lemfuno ye-odolo- abathengi kunokwenzeka ukuba bahlawule ngakumbi ngokutshintshela isipho. Ukuphumelela ngokwenene. Wonga kwindawo yokugcina, kwaye i-odolo yevolumu yakho yokuphakama iyenyuka ngelixa abathengi bonwabile ngemveliso yabo yasimahla.
Isicwangciso sekhuphoni 3: Iikhuphoni ezijolise rhoqo
Ubhubhane ubangele isiphithiphithi xa kufikwa kumba wokunyaniseka kwegama. Njengoko abathengi behlaziya uphawu lwentengiso yabo, amashishini kufuneka abuyise amadala okanye agcine abathengi abatsha. Ukuhlala ngaphezulu kweengqondo zabathengi kwaye ubagcine bezibandakanya ixesha elide, unokubonelela ngemikhankaso yekhuphoni eyonyusa ixabiso ngentengo nganye entsha. Olu hlobo lwenkuthazo lukhuthaza ukuphinda ukuthengisa ngokunika umvuzo obonakalayo wokuthenga kunye negama lakho. Umzekelo, unokubonelela nge-10% isaphulelo kwi-odolo yokuqala, i-20% kwisibini, kunye ne-30% xa kuthengwa okwesithathu.
Ekuhambeni kwexesha, kuya kufuneka ucinge ngokwakha inkqubo yokunyaniseka ukubonisa uxabiso kubathengi bakho bexabiso eliphezulu.
Isicwangciso sekhuphoni 4: (Hayi kakhulu) ukuThengiswa kweFlash
Ukuthengiswa kweFlash yindlela emnandi yokubonisa uphawu lwakho kunye nokutyhala abathengi ukuba bathenge kwangoko. Nangona kunjalo, kuya kufuneka ukhumbule ukuba i-COVID-19 yenze indawo eyodwa yokuthengisa apho ukunyuswa kwe-flash kungasoloko kusebenza ngenxa yokuphuma kwesitokhwe kunye nemicimbi yokuhamba. Ukunciphisa uxinzelelo lwabathengi ngamatyathanga ophuculo, unokucinga ngokwandisa umhla wokuphelelwa kwentengiso yakho. Unokutyala ixesha elininzi kwikopi yakho yokuthengisa ukuyifaka ngokungxamisekileyo (ngokusebenzisa amagama afana "namhla" okanye "ngoku" ukukhuthaza abathengi ukuba bathathe inyathelo. Ngale ndlela, awuyi kuguqula ukunikezelwa kwakho kuphelelwe lixesha elichazwe kwangaphambili, ukunciphisa umthwalo wokugcina unyuselo lwamaqela akho obuchwephesha kunye nentengiso.
Isicwangciso sekhuphoni 5: Ukuhanjiswa simahla
Ngaba ukhe wabeka into kwinqwelo yakho kwaye wawubona lo myalezo mncinci "Yongeza i- $ X kwi-oda yakho ukuze ufumane ukuhanjiswa simahla?" Ichaphazele njani indlela oziphethe ngayo? Ngokwamava am, ndiye ndajonga inqwelo yam yaseAmazon ndacinga, “Kulungile, yintoni enye endiyifunayo?”
Kwimeko yokusika kwintengiso ye-intanethi eyandiswe sisibetho, kufuneka ujonge kuyo yonke indawo ukuze ufumane inzuzo kwintengiso. Ukuhanjiswa simahla sisicwangciso esifanelekileyo sokunyusa umlenze kukhuphiswano lwakho kwaye ukhuthaze ukuguqulwa okungakumbi kunye neziphumo zentengiso ezingcono. Ukuba sihlalutya into yokuhambisa simahla ngokwembono yengqondo, siyabona ukuba olu hlobo lwonyuselo lusahlula abathengi babe ngamaqela amabini-abaphantsi nabaphantsi. Ngelixa inkcitho ephezulu ibona ukuhanjiswa simahla njengeyona nto ifanelekileyo, abathengi abaphantsi baya kukubona ukuhanjiswa simahla njengokunyanzela ngokwaneleyo ukufumana iinqwelo zabo ukuya kwixabiso ekujoliswe kulo. Icebo apha kukuba abathengi ekugqibeleni banokuchitha ngaphezulu ukuziva bonwabile ngokufumana ukuhanjiswa simahla.
Ngaphandle kwamakhuphoni okuhambisa simahla, unokucinga ngokuza nemigaqo-nkqubo yokubuyisa elungileyo. Izigebenga ezinje ngeAmazon okanye iZalando sele ziphumelele iintliziyo zabathengi ngonikezelo olukhawulezayo nolusimahla, amaxesha amade okubuya, kunye nokuthumela simahla kwimbuyekezo. Ukuba ufuna ukwenza imali kumaza we-ecommerce ngequbuliso, iinkonzo zakho kufuneka zihambelane nenqanaba labadlali be-Intanethi ekudala bekho. Unokwenza ukuba amatikiti akho abhalwe ngokusekwe kwimbali yokubuya ukuze ubonelele ngeentengiso ezizodwa zolawulo lomonakalo kubathengi abangonelisekanga okanye ukuvuza abo bangabuyisanga nto ngexesha elimiselweyo.
Isicwangciso sekhuphoni 6: Iikhuphoni zamaqabane
Akumangalisi ukuba ubhubhane ubungumceli mngeni ngakumbi kwiinkampani ezincinci neziphakathi ezinobukho obuncinci kwi-Intanethi. Ukuba ulishishini elinjalo, unokufikelela kwezinye iimveliso ezinikezela ngemveliso eyongezelelekileyo eyakho kwaye unikezele ngentengiso enqamlezileyo kunye namatikiti eenkonzo zakho. Umzekelo, ukuba ubonelela ngezixhobo zeenwele, unokufikelela kwiimveliso zezithambiso zeenwele okanye iisaloon zeenwele.
Kwelinye icala, ukuba inkampani yakho yasindiswa kwiziphumo ezibi zengxaki yezempilo yowama-2020, unokufikelela kubarhwebi abancinci kwaye ubanike nobambiswano nabo. Ngale ndlela, ufumana ukunceda amashishini amancinci endawo kwindawo yakho kwaye uphuhlise umnikelo wokukhuthaza okhangayo kubaphulaphuli bakho. Ngaphaya koko, ngolu hlobo lokujoyina umkhankaso wekhuphoni, wandise ukufikelela kweshishini lakho ngokuvezwa kwintengiso entsha ngokupheleleyo.
Isicwangciso seKhuphoni 7: Iikhuphoni eziSelfowni ezinobuhlobo
Njengabantu ngokwanda kwamanani bathenga ngee-smartphones zabo, bafuna ukuba lonke icandelo lohambo lokuthenga lilungele ukuhamba ngeselula. Inxibelelana njani le nto namakhuphoni? Ukuba sele ufunde ukuba ungazisebenzisa njani ii-imeyile eziphendulayo kunye namakhuphoni, lixesha lokuba inyathelo elilandelayo-lokonyusa amava okuhlangula kunye neekhowudi ze-QR. Ngokubonelela ngeekhowudi kwiifomathi ezimbini (isicatshulwa kunye ne-QR), uyaqinisekisa ukuba izaphulelo zakho zinokuhlawulelwa kwi-Intanethi nakwi-intanethi. Eli linyathelo lokuqala lokwenza amatikiti akho alungele ukuhamba.
Ngaphandle kweekhowudi ze-QR, unokwandisa ishaneli sakho sokuhambisa ikhuphoni ukuba ubandakanye imiyalezo ebhaliweyo kunye notyhilo lwezaziso. Ngoba? Ii-imeyile ayisiyijelo elifanelekileyo ukubamba ngokukhawuleza abathengi 'kwaye zibangele ukusebenzisana ngokukhawuleza. Imijelo yokuhambisa iselfowuni ngokufanelekileyo kunye nokunikezelwa kwekhuphoni esekwe kumhlaba kunye nokuvumela ukuba usabele kwimisebenzi ethile yomsebenzisi okanye iimeko ngokukhawuleza, ezinje ngemozulu egqithisileyo okanye ukungasebenzi.
Kukho izicwangciso ezahlukeneyo zekhuphoni zokukunceda utyhalele phambili iqhinga lakho lekhuphoni. Naphi na apho ukhona kunye notshintsho lwedijithali, amatikiti anokukunceda wenze umyalezo wakho, ulinge ngeendlela ezintsha zokuhambisa, kunye nokwandisa uhlahlo-lwabiwo mali lwentengiso kwimarike yesiphithiphithi.
Amaqhinga akho okuThengisa ngeXesha loBhubhane
Njengoko ubhubhane we-coronavirus ukhawulezisa ukutshintshela kuyo yonke into eyidijithali, ubungakanani bendabuko obulingana nayo yonke indlela yokunyusa buyaphela. Kwimeko yokhuphiswano lwe-COVID-19 ye-ecommerce, ii-brand kuye kwafuneka zibhenele kwisaphulelo ukutsala abathengi abaziyo amaxabiso kunye nokubonelela ngexabiso elongezelelekileyo kwintengiso ezaliswe zizibonelelo ezifanayo.
Isicwangciso esigqithisiweyo esenziwe kakuhle ngoku kufuneka ukuba sibe nesona sininzi kushishino lwe-ecommerce ukuba iinjongo zabo zihlala zihlala ngaphezulu kweengqondo zabathengi. Ngamaxabiso okuhlangula isigqebhezana anyuka e-US nakwilizwe liphela, uphawu lwakho kufuneka lubekho kwisaphulelo. Kodwa zeziphi izaphulelo kunye nemikhankaso yekhuphoni ekufuneka uyiqhubile?
Eli nqaku libala izicwangciso zephulo lekhuphoni eziphezulu ezona zilungileyo (kunye nezona zibalaseleyo) ukubheja ngamaxesha emarike enkulu yokungaqiniseki - ukusuka kwiikhuphoni zabasebenzi ababalulekileyo, iiprosesi zokuhambisa simahla kumava okuncamathelisa alungele iselfowuni. Naphi na apho ukhoyo ngoku kuhambo lwenguqu yedijithali, amatikiti anokukunceda wenze umyalezo wakho, ulinge ngeendlela ezintsha zokuhambisa, kunye nokwandisa uhlahlo-lwabiwo mali lwentengiso kwimarike yesiphithiphithi.
tags: bogo amatikitiIindlela zekhuphoniamatikitii-covid-19iifowuni zokuthengisa ngokukhawulezaamatikiti rhoqoyenza uguquko kwi-intanethiamatikiti eselulaamatikiti mobile-friendlybhubhaneamatikiti amaqabaneiiposti zecommercevoucherify
Ingcali yoPhuhliso loMxholo onamava kwintengiso yedijithali. Umfundi ophumelele kutshanje kwizifundo zaseMelika nakwinkcubeko yesiNgesi. Unamava okusebenza kukhuphiswano lwe-SaaS. Ukuqwalaselwa ngazo zonke izinto zentengiso yanamhlanje, i-analytics, kunye nokuluka ubuchwephesha beekhowudi ezisezantsi kwiinkqubo zeshishini. Umbhali we-B2B onomdla kubaphulaphuli abahlukeneyo, kubandakanya abaphuhlisi, abathengisi, kunye nabaphathi, kunye noluhlu olubanzi lweeasethi- iiwebhusayithi, amanqaku, izifundo zetyala, izikripthi zevidiyo, kunye nokunye. Okwangoku ndisebenzela iVoucherify.io, ejongene nesicwangciso somxholo sokwakha, ukuthengisa ividiyo kunye ne-SEO. Kwabucala, fan yemidlalo yevidiyo, ubuxoki bokubhala, kunye nezifundo zeveganism.
Amanqanaba amathandathu ohambo lomthengi we-B2B